Google Earth 7 inciphisa ukubanjwa kweefoto ezilungisiweyo ze-ortho- iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-Google Earth i-7 imida ukutshintshwa kwezithombe ze-ortho ezilungisiweyo
AutoCAD-AutoDeskGoogle umhlaba / imephu
Xa inguqulelo entsha yePlex.Esithathu se-3 sele iza kuphuma, siyaqonda ukuba nangona ixhasa umthwalo weenkonzo zeemephu zewebhu, inzuzo enkulu esele ikho ukuza kuthi ga ngoku ukuba sikwazi ukukhuphela umfanekiso we-Google Earth ... awuyi kuba kulula kakhulu.
Oku kungenxa yokuba uGoogle, efuna ukuthintela abasebenzisi abafikelele kwi-ActiveX capture ukwenza imifanekiso ye-ortho, uvale kwinguqulelo yasimahla ukhetho lokusebenzisa umhlaba, apho lo mfanekiso uphosakeleyo uzihlalela kwimodeli yedijithali. . Oku kuyakubachaphazela abo bathenga uguqulelo lweStitchmaps ngendlela efanayo kunye nabo bayenzayo ngesandla ngokuprinta-isikrini kwaye babajoyina kwiFotohop.
Ndikhumbula ndizisa esi sihloko ngaphambili noTomás, umyili weCartesia, ngaphezulu kwekofu kulo nyaka uphelileyo. Bekuvakala kunzima ukuba uGoogle asayine isivumelwano nePlexScape ukuyinika i-AutoDesk iyiphikile ukusukela kwinguqulelo ye-AutoCAD 2013. Kwaye, xa sithenga umfanekiso wesethelayithi kunye neGeoeye, esinye sezithintelo kukuba nokuthunyelwa kwi-Intanethi; eyona nto unokuyenza kukubeka amacandelo amancinci kwisisombululo esiphakamileyo okanye umboniso uphela kubungakanani obuncitshisiweyo. Ke kuyamangalisa ukuba yamkele into eyenziwa ngu-Plex.Earth ukuya kuthi ga kuhlobo lwe-6 loMhlaba kaGoogle.
Ngale nto, abasebenzisi banokuqhubeka ukuyenza ngeGoogle Earth 6 okanye bathenge ingxelo ehlawulelweyo eya kwiidola ezingama-400, njengoko uJosé esixeleleyo GIS kunye neBlogDesk.
Okomzuzwana, ndiye ndaqala ukuvavanya kwimeko yendawo ethe tyaba yokuma komhlaba, kwaye ndiyabona ukuba oku kugqwetha kuncinci; ehamba phakathi kweemitha ezi-3 ukuya kwezi-7. Kodwa xa kuvavanywa indawo engalinganiyo, ndifumanisa ukuba iziphumo azikho mfutshane kwintlekele.
Makhe sibone umzekelo olandelayo, ukuba ngeenjongo zeli nqaku ndakhethile indawo apho umda wesithombe esinqununu ukubonakaliswa, ngaphaya kwentaba engaphezu kweemitha ezili-200 ukuphakama:
Ekubeni umda ungundoqo, ukuphazamiseka okubangelwa ukukhululeka akubonakali, nangona kubonakala ukuba ekupheleni kwayo kuboniswe kwimifanekiso elandelayo xa sisuka ngakwesobunxele nakwesokudla.
Ngoku masicinge ukuzama izikrini kunye nokuzama ukuthunga into enje kunye. Ngokuqinisekileyo ngale Google ithatha inyathelo elibalulekileyo kuhlobo lwayo oluhlawulelweyo ukuthengisa ngakumbi, kunye nokukhusela ukwaphulwa kokukhutshelwa okukhulu.
Okwangoku, ukulungisa ingxaki, I-Plex.Earth yongeze kwi-3 version Ezinye izinto ezifana:
Ukukwazi ukuxhasa i-WMS, apho sinokukunamathisela khona imifanekiso kunye nezobekwa kwiindawo ze-OGC ezikwimiqathango ye-OGC kwii-IDE zelizwe ngalinye.
Ithuba lokukhuphela imifanekiso kwi-BingMaps, nangona ingenayo ingxelo efanayo, ifikelela ngaphezulu yonke imihla. Ikwaxhasa iimephu zeOpenStreet.
Ukutshintshwa kwenguqu entsha:
Imodeli yelayisensi ye-Standard-Pro-Premium apho uguqulelo ngalunye lwalunezinto ezahlukileyo kunye nezihamba kancinci. Ngoku naluphi na uhlobo lunayo yonke into.
Iimodeli ezintsha ze-Business Edition kunye ne-Enterprise Edition, nazo zonke izixhobo kwaye zahluke ngoomatshini.
Kwimeko yenguqulo yeShishini, kukho ixabiso lelayisensi enye, kunye nenye yokuthenga iilayisensi ezi-2 ukuya kwezi-10. Uncedo lokuba ilayisenisi ingasetyenziswa koomatshini ababini, umzekelo, eofisini nasekhaya, okanye kwi-PC yedesktop nakwilaptop. Ngokuqinisekileyo, ayinakusetyenziswa ngaxeshanye.
Kwimeko yelayisensi yeShishini, kukho intengo yeelayisensi ezili-10, ezinokusetyenziswa koomatshini ababini inye; okanye ama-20 ewonke. Umtsalane wale nkampani, kuba ziyadada, ukuze zisetyenziswe kuwo nawuphi na umatshini oxhunywe kwinethiwekhi, usebenzisa ukungena ekubambeni ilayisensi ekhoyo kwaye ujonge ukuyikhupha.
Ekugqibeleni, amanani aya kuba angabizi xa sicinga umshini ombini.
Siyazi ukuba phakathi kweli nyanga kaFebhuwari le nguqulelo yePlex.Earth iya kufumaneka, apho sisicinga ukuba umtsalane weMaphu Explorer okhoyo ngoku uquka umzobo omtsha ubonakala ukhangeleka.
Iimeko zichaphazela xa ufuna ukukhuphela iifolda zokuzibandakanya njenge-mosaic.
Ukuhamba ngokuqhelekileyo, akukho nxaki, akukho mpazamo, ngaphandle kokuba umhlaba awukwazi ukucinywa.
Molo, ninjani abahlobo abasuka eGeofumadas? Jonga ukuba ndiyayiqonda, ingaba le nto ithetha ukuba kwiGoogle Earth 7 entsha imifanekiso iya kugqwetha ngakumbi? ke balahlekelwe ngumgangatho xa bekhutshelwa okanye bekhangelwa kwi-GE efanayo? Ndisenenguqulo engu-6.3 ...